မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတဿ္တများ: မင်းအတွက် အင်တာဗျူး အဖြေ
မင်းအတွက် အင်တာဗျူး အဖြေ
ခပ်ရိုင်းရိုင်း ဟက်ကာတစ်ယောက်ရဲ့ အင်တာဗျူးလျှောက်လွှာလက်ခံပုံများကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြန်ရေးထားသည်။
Apparently my boss thought it would beagood idea for me to hireanew security guy for some upcoming work, so he posted onafew job sites and the results are sent to me. Turns out I hate everyone.
Dear person who has no chance of getting hired,
* I don’t giveafuck what your middle name is.
မင်းရဲ့ ဆောက်ရေးမပါတဲ့ Middle နာမည် ကို မသိချင်ဘူးကွ။
* I’m not reading6pages, you’re not that important.
ဟေ့ကောင်။ မင်းလျှောက်လွာ ၆မျက်နှာလောက်ရေးထားတာ ကို ငါ ဖတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးကွ။ မင်းအဲလောက် အရေးမပါဘူး။
* Try to spell the name of the employer you “worked” at for4years correctly.
မင်း အလုပ်ရှင် နာမည် စာလုံး မှန်အောင် မပေါင်းနိုင်ရင် မင်းဘာလာလုပ်တာလဲ။
* Your “Objective” seems to be rather broad forajob listed as “Sr Security Engineer”.
ခေါင်းစဉ်က Senior Security အင်ဂျင်နီယာနော်။ သေချာမှတ်ထား။
Objective: To contribute as VPE, CTO, principal architect, chief scientist, staff mentor, or hired gun consultant.
* Once again the title is “Sr Security Engineer”, that means don’t email me from your AOL account.
ထပ်ပြောဦးမယ်။ Senior Security အင်ဂျင်နီယာ။ မင်းဘိုးအေ AOL Free အီးမေးလ် အကောင့် ကနေ လာပို့မနေနဲ့။
* “System Administration and Network Security” is nota“Professional Association”, it’safucking sentence fragment.
* You listed “INTERNATIONAL HACKERS CONFERENCE LAS VEGAS” under “Education”, you mean defcon or blackhat was your professional edumafukincation???
မင်း ပညာအရည်အချင်းအောက်မှာ "နိုင်ငံတကာ ဟက်ကာ ဆွေးနွေးပွဲ" ကို ထည့်ထားတာ၊ မင်း ရဲ့ အရည်အချင်းဆိုတာက အဲဒီကမှ စသိတဲ့ ဟာမျိုးလား။
* I understand you may not want to email your resume from your current employer, that’s fine, but if you don’t have at least one external email address you can get securly to, you’re nota“security guy” in the first place, go away.
မင်း အခု အလုပ်ကနေ မေးလ် မပို့နိုင်တာ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မင်း ကိုယ်ပိုင် အီးမေးလ် လေး တစ်ခုမှ မရှိဘဲ၊ မင်းဘယ်လို Security ကောင် ဖြစ်မှာလဲ။
* We don’t hire one handed engineers, they type half as fast.
ဟေ့ကောင်။ မင်း စာလေးရိုက်တာတောင် ဒီလောက် မြန်အောင် မရိုက်နိုင်ဘူးလား။ ငါတို့ လက်တစ်ဖက်ပဲ ရှိတဲ့ ကောင်ကို မငှားဘူးကွ။
SUMMARY OF EXPERIENCE: Over 10 years of Hand - On IT Network Administrator experience
* A Windows 2003 Server logo in your resume is sad, pathetic and worthy ofacock punch.
မင်း ဝင်းဒိုး ၂၀၀၃ က အရုပ်ကြီးကို မင်း လျှောက်လွှာမှာ ထည့် ထားတာ သိပ်စောက်မြင်ကတ်စရာ ကောင်းတယ်ကွာ။
* Yeah I get it, you’re Chinese and don’t like plural words, but when the proper name ofaproduct contains an “s” at the end, try and fuckin use it.
အိုကေ။ ငါသိပြီ။ မင်းတို့က တရုတ်တွေ မို့လို့ အများစာလုံးတွေမှာ "s" တွေ မထည့်တာငါသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နဂို ကတည်းက ပါတဲ့ "s" ကိုတော့ စောက်ဂရုလေးစိုက်ပြီး ထဲ့စမ်းပါကွာ။
Network Management Tool: Ciscowork LAN Management Solution, CiscoWork 2000, Cisco Call Manager
* Once afuckinggain how fucking half ass are you to not bother to change your objective to something that kind of sorta just maybe fits the position, this time the job title was “Senior Network Engineer”.
LIE TO ME AND PRETEND THAT IS WHAT YOU ACTUALLY WANT TO DO.
ဟေ့ကောင်။ လာလိမ် မနေနဲ့ မင်းလုပ်ချင်တာ Cisco အလုပ်၊ မင်းတတ်တယ်ဆိုတာလဲ အဲတာ။ ဒီမှာ Senior နက်ဝပ် အင်ဂျင်နီယာ လာလိမ်ပြီး လျှောက်မနေနဲ့။
Career Objective: To broaden expertise and apply my Electrical Engineering skill set inacreative manner to motivate present and future technologies.
"မိမိရဲ့ပညာကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်ရဲ့နောင်တစ်ချိန်တိုးတက်မှုနဲ့ နောင်ပေါ်လာမယ့် နည်းပညာတွေကို လိုက်စားချင်ပါတယ်"
* You sent your resume today at 8:38AM, 11:13AM and 5:15PM, I deleted all3at 9:22PM.
မင်း လျှောက်လွာ ပို့တာ ၃ခါရှိပြီ။ ငါအကုန်လုံး ဖျက်ပလိုက်ပြီးပြီ။ ဆောက်ပိုတွေ လာပြောမနေနဲ့။
* If this appears in your resume, you’re not getting hired.
Member of International High IQ Society, USA
* Almost more than anything else, I don’t fucking care what frat house you were in.
မင်းဘာသာ ဘာကောင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆောက်ဂရုမစိုက်ဘူးဟေ့။
* Gee, thanks for telling me about the position your applying for.
မင်းလုပ်ချင်တဲ့ နေရာကို ပြောသွားတာ ကျေးဇူးပါကွာ၊ တောက်။
The Solution Architect isasales focused technology specialist who creates great client intimacy by their technical expertise. As well as being viewed asatrusted technical advisor to the client, asaSolution Architect I’m also involved in developing new products and services, by working as the technical arm of the Practice.
* Yes, it’satechnical resume, but this is just dumb
LANGUAGES: Spanish = Fluent
ဘာသာစကား။ စပိန်ဘာသာ = ကျွမ်းကျင်ခြင်း
* Is English that hard ofalanguage? “and Linux in LAN”? wtf?
ဟမ် အဂဿငလိပ်စာ။ အဲလောက်ပဲ ခက်သလားကွာ။ LAN မှာ Linux??။ ဟမ်။ ဘာတွေလာပြောနေတာလဲကွာ။
Have worked extensively for Troubleshooting and Designing networks comprising of Windows 2000/NT, Novell NetWare, and Linux in LAN as well as WAN.
* Use words that are words please.
စကားလုံးတွေ သေချာသုံးစမ်းပါ။ ဘာကို ဆိုလိုချင်မှန်းမသိဘူး။
Troubleshooting, upgradation of system hardware as and when required.
hardward တွေပြင်တတ်၊ အဆင့်မြှင့်တတ်ပါတယ်။
Upgradation of System BIOS and firmware with latest available version.
DOS 5.x 6.x.
DOS ဝင်းဒိုးမပေါ်ခင်က Text-based OS.
* It’s 2006, don’t put “proficient withahammer” on your resume
အခု ၂၀၀၆ ခုနှစ်ရောက်နေပြီ။ မင်း တူကောင်းကောင်းသုံးတတ်တာ ဘာမှ သုံးစားလို့မရဘူး။
My technical career started in 1985 asaSenior Field Engineer
၁၉၈၅ ကတည်းက စီနီယာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
* No, the word “Senior” implies that it didn’t start there, you’ve just had an inflated sense of importance from the start
စီနီယာ ဆိုတာ မင်း စလုပ်လုပ်ခဲ့တာကို မေးတာမဟုတ်ဘူး။ မင်းကိုယ်မွေးထားတဲ့ မြင်း အထီးမှန်း မသိသလိုဘဲကွ။
* You worked foracompany called “GetRelevant” during dot com, you obviously have bad judgment…maybe that’s why your job title goes from VP to manager?
မင်းအလုပ်လုပ်ဖူးတယ် ဆိုတဲ့ ကုမဿပဏီဆိုတာက အခု သူများဝယ်သွားပြီ။ ဒါဟာ မင်းအသုံးမကျတာကို ပြတာပဲ။
Remarkable knowledge on FTP
FTP အကြောင်း ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်။
* Well I have Remarkable knowledge on breathing
အေး၊ ငါလဲ အသက် ကောင်းကောင်းကြီး ရှူတတ်ပါတယ်ကွာ။
Pls find the profile of our consultant Jane Doe for QA positions
* In professional communications do not email me using IRC slang
အီမေးလ်မှာ ဒီလို စကားလုံး အတိုတွေ ဗန်းစကားတွေနဲ့ လာရေးမနေစမ်းနဲ့။
original - http://www.fthe.net/
သိလိုက်ရတာတော့၊ ဪ ဒီလိုလူမျိုးတွေပါလားလို့။ ဟဟ။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, October 05, 2008
ကဏဿဍ : Shits
Hmm... what's he so furious about anyway.
maybthats their personalities, LoL!
ALan - 幸せの鐘 - ပျာရြှေငျခွငျးရဲ့ ခါငျေးလာငျေးသံ
Google Adwords take money without user permissions
Riya - 空に光る　(sora ni hikaru)
သင်ဒါမျိုးလေးတွေ ဖတ်ထားရင် အကျိုးမယုတ်ပါဘူး။
Guest OS run better than Host Machine
Converting Babylon's .bgl file to source file
CLI သို့ GUI လား
Debug commands and PE Router